Published April 13, 2021 at 9:14 PM CDT
Badhasaabka Nebraska Pete Ricketts ayaa sheegay in uu diiday codsi ay dawlada federaalku u soo gudbisay oo ahaa in laga caawiyo guryaha caruurta soo galootiga ah. Gudoomiyaha jamhuuriga ayaa sheegay in uusan ku raacsaneyn siyaasada maamulka Biden ee ah in caruurta loo ogolaado in ay tagaan "kafaala qaadayaasha" Mareykanka, badiyaa waalidiinta ama qaraabada dhow, inta ay ku daba jiraan kiisaska magangalyada
Hadalkiisa ayaa yimid maalmo kadib markii gudoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds uu ku dhawaaqay dhawaaq kan lamid ah.
Waaxda Booliska Magaalada Sioux waxay badashay siyaasadeeda markay tahay la socoshada dhacdooyinka "muujinta xoogga".
Warbixin dhowaan ay soo saartay Waaxda Iowa ee Badbaadada Dadweynaha ayaa muujisay koror weyn oo ku yimid xoog ay adeegsadeen saraakiisha Iowa sanadii 2020. Waxaa jiray koror 83% ah hal sano.
Waaxda Booliska Magaalada Sioux waxay biloowday dabagalka adeegsiga dhacdooyinka xoog laga bilaabo 1-dii Abriil. Intaas ka hor, waxay diiwaangeliyeen oo keliya kiisaska maqnaanshaha. Sanadkii 2019, 68 darawal ayaa kaxeeyay sarakiisha, sanadka 2020 tirada waxay noqotay 78.
Qoraal lagu sii daayay Siouxland Public Media, waaxdu waxay ku sheegaysaa inaysan jirin dhacdo keentay isbadalka. Si kastaba ha noqotee, waxay ku darsadeen siyaasadda inay kahortagaan heerarka qaranka, hagaajinta adeegga bulshada, daahfurnaanta, iyo islaxisaabtanka.
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa ayaa soo warisay inaysan jirin dhimasho cusub sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19. Waxaa jiray 146 kiis oo cusub…